Gaytan Nikolas - nganekwane "Benfica"
Okwamanje, eziningi inkulumo mayelana abadlali onjalo afana ngazo Gaitán. Nicholas manje spotlight Madrid "Atletico", okuyinto uhlela ukuba baqinise ehlobo lika-2016 umdlali Argentina. Kodwa ongakabi isinqumo, futhi ngenkathi sizongena amakilabhu ngalutho ukuthatha sibheke indlela ukuthuthukisa umsebenzi walesi yehlukene kaningi okubalwa okuhlaselayo umugqa umdlali ubani okhetha ukuba isikhundla winger kwesokunxele. Gaytan Nikolas - lena sibalo ezithakazelisayo kakhulu emhlabeni football, futhi ikakhulukazi - emhlabeni "Benfica" football club.
Hhayi ngokushesha Gaytan Nikolas wavula njengoba kicker okusezingeni eliphezulu. Wazalwa ngo-Argentina. Kusukela esemncane ngaya bahlanganyele esikoleni football esiqine club "Boca Juniors" yezwe. Wachitha khona zonke iminyaka yakhe abasha, kodwa akekho bekubona njengendlela ithalente okunjengalokho kuqala. Lapho ngineminyaka engu-nesishiyagalombili Gaitán naye usayine inkontileka professional ne club, kodwa abaphathi wangabona kuwo umdlali agcwele iqembu core. Ngakho-ke, unyaka wokuqala likanobhutshuzwayo ayihlala impinda. Phakathi nonyaka we-match elesibili kubangelwe iqembu wokuqala, enikeza ukunambitheka omdala football. Ngokusobala, Gaitana bathandile ukunambitheka, futhi waqala okuthola kunzima ukusebenza ngokwabo. Ngonyaka olandelayo, u-Nicholas isibe umdlali base club agcwele "Boca Juniors". kweminyaka emibili yamakhonsathi, lapho yena club wakwazi ukunqoba ubuqhawe Argentina, kwakwanele ukuba siqinisekise ukuthi umdlali uye yabakhanga amaqembu European. Futhi ngo-2010 i-Gaytan Nikolas oneminyaka engu-22 ubudala uye kubo isiPutukezi "Benfica", ukukhokha kuye eziyisishiyagalombili kanye euro sesigidi.
Kusukela ezinsukwini zokuqala Gaitán wakwazi ukunqoba indawo uhlelo kokuqala. Kwacaca ukuthi football club "Benfica" akalithabathanga ikati esikhwameni - counting manual ithalente abasha, futhi kwacaca ukuthi, hhayi miscalculated. ngokushesha Footballer waqala ukubonisa side yabo emihle kakhulu, futhi iminyaka eyisithupha wachitha club, seyenze inqubekelaphambili enkulu. Ngo-2011 no-2012, "Benfica" iwine iNdebe League ngo-2013, isifinyelele sokugcina-Europa League, lo mncintiswano yodumo yesibili ezingeni club emhlabeni, okuyinto elahlekile London "Chelsea".
2014 kwaba unyaka esivelele "Benfica", futhi Gaitana: club won ubuqhawe Portugal, amaPutukezi Cup, iNhlangano Cup, i-Super Cup of-Portugal and the yesibili ngonyaka ilandelana, wema on the esengozini udala isasasa. Njengoba waphinde walahlekelwa kowamanqamu Europa League, kodwa manje "Seville" futhi kumaphenalti. Uma hhayi ukuthi, "Benfica" ngabe ukuqoqa Trophies ngokuphelele yonke kungenzeka kwakho ngomnyaka owodwa, kodwa ukuzwa akazange impela kancane babe.
Iminyaka emibili yokugcina football club "Benfica" uqeda efanayo - ku kwasekuqaleni-Championship of-Portugal and the League Cup. Kuze kube manje, enye yayineminyaka eyisithupha ngaleso club Nico Gaitán ukudlalwa 253 okufanayo futhi ufake igoli engamashumi amane nanye. Kodwa uma ufuna ukuthola umqondo ongcono mayelana lo mdlali, ke ukubala esiza, kwaze kwaphela iminyaka eyisithupha. Siye baqoqa amaningi njengoba ayisishiyagalombili nesikhombisa izingcezu. Nokho, manje ngokuya kukhona amahemuhemu ukuthi Argentina ehlasela mdlali ehlobo lika-2016 izohamba club.
A inselele entsha e Madrid, "Atletico"
Muva nje, uthole ulwazi oluthe xaxa nokuningi izovela cindezela ukuthi inkathi yamanje (15/16) kuyoba zokugcina, ngubani ubambe "Benfica" Gaytan Nikolas. Ukuhambisa ku-"Athletics" ngabaningi media Izitolo wazibona njengoba Empeleni okunethezekile. Kuze kube manje, lo isaziso esisemthethweni akukabonakaliswa, kodwa abaningi bakholelwa ukuthi ukudluliswa lokho empeleni ikhishwe.
Kwakukhona nezinye amakilabhu ababenesithakazelo ithalenta kangaka njengoba Nicolas Gaitán. "Zenith", isibonelo. Noma kunjalo, "Atletico" - kowamanqamu we Champions League, futhi uma Argentina futhi kuzodlula, kodwa ithimba ezingeni eliphezulu enjalo. Ngokwemvelo, kucatshangwa Cup Melika, futhi bonke abadlali bagxile ukubonakala kakhulu amaqembu abo kazwelonke, ngakho isinqumo mayelana ukudluliselwa zizokwenziwa kuphela ekupheleni ubuqhawe.
Imisebenzi iqembu lesizwe
Gaitán waqala ukusebenza kwakhe Argentina lumelele unyaka ngaphambi wathuthela "Benfica". Kodwa lapho enza ukudluliswa wakhe, umdlali ibaluleke kakhulu ngoba iqembu kunangaphambili. Okwamanje, Nicolas wadlalela nanhlanu okufanayo lapho yena amagoli amabili futhi wanikeza esiza ezimbili.
Adnan Januzaj: ibala elikhanyayo e ukwehluleka kaDavide Moyes 'Manchester United'
"Adidas" - edume umkhiqizi amabhola!
Ihambe wethu kusukela "Euro-2016". Izizathu futhi Iziphetho
Hose Kalehon: Biography of umdlali Spanish
Ukususwa kwezimiso izindawo esikhunjeni ebusweni salon nekhaya izindlela
Umzimba ezakhelwe ukugobeka komhlandla
Iminyango eziphezulu Ingaphakathi: abakhiqizi phezulu
Umzimba for esiswini emva kokubeletha. Umzimba for kokuqina esiswini ngemuva kokuthi umama nokubeletha ubuhlengikazi
Indlela efanele, indlela ukupheka isikhwebu sommbila
Toy nezimvu pompons ngezandla
Ukuphinga - kuyini? Esonweni sokuphinga e-Orthodox
Coloured lens. Izibuyekezo. izinhlobo
Amafomu ekudaleni imikhiqizo ekhonkolo